२० वर्षपछि क्रोएशियाको भाग्य चम्क्यो, बनायो यस्ता रेकर्ड ! – Everest Dainik – News from Nepal
२० वर्षपछि क्रोएशियाको भाग्य चम्क्यो, बनायो यस्ता रेकर्ड !
मस्को । रुसमा जारी विश्वकप फुटबलको चौंथो तथा अन्तिम क्वाटर फाइनल खेलमा क्रोएशिया विजयी भएको छ । आयोजक राष्ट्र रुसलाई ट्राइबेकरमा ४ ३ ले स्तब्ध पार्दै क्रोएशिया विजयी भएको हो । यो जिसँगै उसले १९९८ यता पहिलो पटक अन्तिम ४ मा स्थान बनाउन सफल भएको छ । खेलको निर्धारित समयमा दुवै टिमले १-१ गोल गरेका थिए । एक्स्ट्रा समयमा १ १ गोल अरु बनाउँदा दुवैको टिमको स्कोर समान २-२ पुग्यो ।
क्रोएशियाको लागि क्रेमरिचले ३९औं मिनेटमा र डोमागोज विदाले १०१औं मिनेटमा गोल गरे । यस्तै, रुसका लागि डेनिस चेरीशेवे ३१औं र मारियो फर्नडेसले ११५ औं मिनेटमा गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याउन गर्न सफल भए । खेल बराबरीमा पुगेपछि खेलको निर्णय मेनाल्टी शुटआउटमा गयो ।
क्रोएशिया एकै विश्वकपमा दुई पटक पेनाल्टीमा जित्ने दोस्रो टिम बनेको छ । योभन्दा पहिले अर्जेन्टिनाले १९९० मा पेनाल्टी शूटआउटमा यूगोस्लाभिया र इटालीलाई हराएको थियो । यस्तै, क्रोएशियाका गोलकीपर सुबासिच लगातार दुई खेलको पेनाल्टीमा सबैभन्दा बढी शट रोक्न सक्ने तेस्रो गोलरक्षक बन्न सफल भएका छन् ।
उनीभन्दा पहिले अर्जेन्टिनाका सर्जियो गोयकचेया र पश्चिम जर्मनीका हेराल्ड शुमाकरले ४ शट रोकेका थिए । यसैबीच क्रोएशियाका राष्ट्रपति कोलिंडा ग्रैबर किटारोविक रुस र क्रोएशियासँग भएको खेल हेर्न रसिया पुगेका थिए ।
रुस सन् १९६६ पछि दोश्रो सेमिफाइनल पुग्ने सपना आफ्नै मैदानमा चकनाचुर भयो । क्वाटरफाइनलसम्मको यात्रा तय गर्दा पनि दुवै टोलीले टाइब्रेकरमा जितेका थिए ।
बलियो दावेदार मानिएको स्पेनलाई रुसले र डेनमार्कलाई क्रोयसियाले घर पठाए ।
क्रोएसिया समूह डी को बिजेता र रुस समूह ए को उपविजेता बन्दै अघि बढेका थिए । समूहका आफ्ना सबै खेल जित्यो क्रोएसियाले । तर आयोजक रुस सुरुका दुई खेलमा तहल्का पिटे पनि उरुग्वेसँग पराजित भयो । क्रोएसिया त्यो टिम हो जसले पूर्वविजेता अर्जेन्टिनालाई समूहको खेलमा ३-० ले पराजित गरेको थियो । यो खेलको नतिजासँगै सेमिफाइनलको समिकरण पूरा भएको छ । -एजेन्सी
ट्याग्स: CROATIA, croatia goalkeeper, Fifa world cup 2018